Umhlahlandlela Wama-SARM Wokugcina Wango-2021 | Isitolo se-SARM UK
Ama-SARM 101: Umhlahlandlela Wakho Wokugcina wama-SARM
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu noku-oda imikhiqizo yethu uyavumelana nemigomo elandelayo
Kufanele ube ngaphezu kweminyaka engu-18
Akufanele nakancane ukuthi imikhiqizo yethu isetshenziswe kunoma yiziphi izivivinyo zabantu e-UK ngaphandle kweHhovisi Lasekhaya noma ukugunyazwa kwe-MHRA. Akuyona Imikhiqizo Yezokwelapha Ephenyayo.
Imikhiqizo yethu ye-SARMS ithengiswa kuphela ngenhloso yocwaningo kuphela.
Yonke imikhiqizo ekhangisiwe, ethengisiwe noma eshiwo ngenye indlela kule webhusayithi yilezi AMAKHEMIKHALI WOKUHLOLA LABORATORY
Siqoqe konke odinga ukukwazi nge-SARMS. Kulesi siqondisi sama-SARM, uzokuqonda ukuthi ayini ama-SARM, ukuba semthethweni nokuphepha kwama-SARM, uma ama-SAR enemiphumela engemihle. Siphinde sihlanganise ama-SARM amahle kakhulu wabaqalayo, ama-SARM amahle kakhulu wokusika, lapho angathenga khona ama-SARM, nokuningi.
Funda ukuze uthole umhlahlandlela ophelele we-SARM.
Ama-Modulators we-Androgen Receptor Modulators, noma ama-SARM, uhlobo lwenhlanganisela yokwelapha. AmaSARM kubikwa ukuthi anezinhlobo ezifanayo zemiphumela njenge izidakamizwa ze-androgenic (njenge-steroids). Kodwa-ke, kufanele ukuthi bakhethe kakhulu ezenzweni zabo. 'Ukukhetha' kwabo yikho kanye ukuthi kubhekwe njengabasizo, kuphephile ukusetshenziswa futhi sebekhulile ekuthandeni.
Ama-SAR asungulwa ekuqaleni ukusiza ukuphatha izimo ezinjengokukhuluphala, ithambo, nokuchitheka kwemisipha okubangelwa ukuguga nezifo (njengomdlavuza). Kepha, muva nje, ama-SARM amukelwe abasubathi kanye nomphakathi owakha umzimba. Zibhekwa njengeziphephile ekusetshenzisweni kune-steroids futhi kubikwe ukuthi zikhiqiza imiphumela engemihle kakhulu.
Uyini umehluko phakathi kwama-SARM nama-Peptides?
Ukuqonda umehluko phakathi kwama-SARM nama-peptide, kubalulekile ukuthi uqale uqonde ukuthi yini ama-peptide.
Ama-peptides awuhlobo oluthile lwesengezo sokwakha umzimba esiqukethe ama-amino acid angaphansi kwama-50. Ama-peptides nawo akhiqiza imiphumela emibi embalwa kune-steroids (efana nama-SARM) futhi awunawo umphumela oqondile we-anabolic. Zisetshenziselwa ukwandisa uketshezi kwe-hormone yokukhula.
Ukufana phakathi kwama-SARM nama-peptide
Ama-SAR kanye nama-peptide womabili aziwa ngokuba nemiphumela emibi embalwa kune-steroids
Kokubili kusemthethweni ukuthenga ngaphansi kwezimo ezithile
Zombili lezi zinhlobo zezinto ezakha imisipha
Ngamunye unomphumela ongaqondile we-anabolic emisipheni nasemathanjeni
Umehluko phakathi kwama-SARM nama-peptides
Ama-SAR ayenziwe, kanti ama-peptide angaba awemvelo noma awenziwe
Ama-SAR awuhlobo lwe-androgen ligand-receptor ngenkathi i-polypeptides chain ne-amino acid engaphansi kwama-50
Ama-SAR abopha i-androgen receptor emisipheni nasemathanjeni ukukhulisa ukukhula kwawo ngenkathi ama-Peptides enyusa ukukhishwa kwe-hormone yokukhula
Ama-SAR akhiqiza umphumela okhetha kakhulu ekwakheni amathambo nemisipha ngenkathi ukukhethwa kwama-peptide kuphansi
Ingabe ama-SARM aphephile?
Kubalulekile lapho ucubungula ukusetshenziswa kwama-SARM ukuqhubeka ngokuqapha. Imboni yamaSARM okwamanje ayilawulwa, ngakho-ke kunemikhiqizo eminingi esezingeni eliphansi (futhi imbumbulu) laphaya emakethe.
Kunezinhlobonhlobo zama-SARM atholakalayo, kanti amanye athathwa njengokuvikeleka kunamanye. Okwamanje, izifundo zesayensi futhi ama-akhawunti omuntu awanikeze ukuthi aphephe kune-anabolic steroids.
Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi uthenga ama-SARM kumthengisi osemthethweni onokuqinisekiswa okuvela eceleni, ngakho-ke uyazi ukuthi uthenga ama-SARM wangempela. Amaqoqo ethu asezingeni eliphakeme futhi akhiqizwa e-UK enezithako zebanga lemithi. Ungakwazi hlola amaqoqo ethu lapha.
Ingabe ama-SARM asemthethweni?
E-UK ukuthengiswa kwamaSARM kusemthethweni. Kodwa-ke, indlela ama-SARM athengiswa ngayo ikhawulelwe ngokuya ngenhloso yomkhiqizi, umthengisi, nomthengi.
Asebenza kanjani ama-SARM?
Ama-SAR asebenza ngokufana ne-anabolic steroids, yingakho abhekwa njengenye indlela ye-steroids, enezakhiwo ezehlisiwe ze-androgenic.
Ama-SAR ashukumisa ngokukhethekile ama-androgen receptors kumaseli emisipha namathambo — ukusheshisa ukukhula ngenkathi enethonya elincane kwamanye amaseli emzimbeni (ngokungafani ne-steroids). “Bakhetha” izicubu ezithile kuphela zemisipha namathambo, beshiya ezinye izingxenye ezinjengesibindi, indlala yesinye, nobuchopho kungathintwa.
Asebenza kangakanani ama-SARM? Ingabe ziyasebenza?
Ama-SARs aziwa ukuthi amnene, kepha ayasebenza kakhulu. Imiphumela ngqo ekhiqizwayo incike ohlotsheni lwe-SARM oluthathiwe. Isibonelo, i-Ostarine ithathwa njengenye yama-SARM amahle kakhulu ukuqala ukuthatha.
Ukusebenza kwamaSARM futhi kuya ngezinhloso zokuqina. Uma izinhloso ukushisa amafutha nokwakha imisipha, i-SARM efana ne-Ostarine iyasebenza ekusizeni abasebenzisi ukuthi bathole noma yikuphi kusuka kumakhilogremu ama-4 kuye kwayi-10 cishe emavikini ayi-12.
Ingabe ama-SAR anemiphumela emibi?
Imiphumela emibi ebikiwe yama-SARM incane kakhulu kulutho. Ama-SARM amaningi, i-Ostarine ifakiwe, ayinayo i-methylated ngakho-ke ngeke ithinte isibindi.
Eminye yemiphumela emibi ebikiwe kube ukukhathala nobuthakathaka, yize kuthiwa ngaphansi komthamo onconywayo amathuba okuba nale miphumela emibi aphansi kakhulu.
Iqiniso kungenxa yokuthi ama-SARM amasha sha, ucwaningo alukwazanga ukukhombisa imiphumela yesikhathi eside yokusebenzisa ama-SARM, yize ekuqaleni adalelwa ukuhlinzeka ngenye indlela enhle kuma-anabolic steroids.
Ukuthi umsebenzisi uhlangabezana nemiphumela emibi futhi kuncike emandleni e-SARM, isibonelo, i-SARM enamandla ingaba nengozi ephezulu yemiphumela emibi. Eminye yemiphumela emibi ekhokhwayo ifaka phakathi:
Ukwehliswa kwesibalo sesidoda namazinga we-testosterone
Isikhumba nezinwele ezinamafutha
Shintsha kumazinga we-cholesterol
Eminye imiphumela emibi ebikiwe engenakulungiswa yama-SARM athathwe ngemithamo ephezulu ifaka:
Ingozi yomdlavuza eyandisiwe (ngama-SARM akhethiwe)
Ingabe ama-SARM ayakufanelekela?
Ukuthi ama-SARM abalulekile yini noma cha kuya ngesimo esithile somsebenzisi. Amanye ama-SARM angcono ukusika amafutha, amanye angcono ekukhuphukeni. Kwabanye, ama-SARM awusizo kakhulu ekuvimbeleni ukuchitheka kwemisipha nokwenza ngcono impilo yamathambo jikelele. Konke kuncike ekutheni inhloso yokugcina ukusebenzisa ama-SARM.
Yimaphi ama-SAR okufanele ngiwathathe?
Uhlobo lwe-SARM oluthathayo kanye nesitaki osithathayo (uma sikhona) kuncike kakhulu ekutheni umzimba womuntu uphendula kanjani kuma-SAR kanye nezinhloso zabo zokuqina. Nazi izinhlobo ezinhle kakhulu zama-SAR ngezinhloso ezahlukahlukene ezilandelayo:
Ama-SARM amahle kakhulu wabaqalayo
Lawa ma-SARM akhethwayo wabaqalayo futhi nabesifazane abafuna umthamo ophansi:
Ungathola inhlanganisela yalezi 'zokuqala' Ama-SAR esitokisini lapha.
Ama-SARM amahle kakhulu wokusika
Abasebenzisi abaningi bama-SARM bakholelwa ukuthi bayasiza kakhulu ekusikeni ngoba basiza umzimba ukuthi ugcine umsipha omncane ngaphandle kokukhulisa ukugcinwa kwamanzi. Nawa ama-SARM amahle kakhulu wokusika:
Ama-SARM amahle kakhulu we-Bulking
Nawa amanye ama-SARM amahle kakhulu wokuzuza ukukhwabanisa nokuzuza kwemisipha:
Isitaki esihle samaSARM
Kunezinhlobo eziningi zezitaki zamaSARM ongakhetha kuzo. Nazi ezinye ezinhle kakhulu:
Isitaki sokusika sokuqala
Isiqalo Semisipha Yokuqala
Isitaki Esisemkhatsini Sokusika
Intermediate Muscle Isitaki
Isitaki Esithuthukile Esithuthukile
Ukudla kwakho kuma-SARM
Imiphumela oyitholayo ngesitaki se-SARM izoba nkulu kakhulu lapho ubhangqwe nokudla okulungile. Ukuthatha ama-SARM wedwa ngeke kunikeze umzimba owufunayo uma ungadli ukudla okulungile noma uzivocavoca.
Ukhiye ngama-SARM ukukhulisa amaprotheni ekudleni kwakho. Ama-SAR abeka umzimba wakho ngaphezulu kwesimo se-anabolic, ngakho-ke, umzimba wakho uzokwazi ukukhulisa ukuhlanganiswa kwamaprotheni. Isincomo esivamile ukuphinda kabili ukudla kwakho amaprotheni okuvamile.
Ama-SAR avame ukuba nomphumela we-anti-estrogen. Ukulwa nalokhu, kubalulekile ukwengeza imifino eminingi ekudleni kwakho, ikakhulukazi leyo elwa nemiphumela ye-anti-estrogen njengamakhowe. Kukhona futhi izithako nezinhlobo zokudla okufanele ukugweme ngokuphelele, njenge:
Inyama ephulukisiwe ene-nitrate eningi kakhulu
Ukudla okuthosiwe / okushayiwe
Ukudla okusetshenzisiwe ngezithako zokufakelwa namafutha we-hydrogenated
Abesifazane bathanda ukuthatha ama-SAR ngezizathu ezifanayo njengabesilisa: ukukhulisa amandla nokuqina, bashise amanoni, futhi bathole imisipha ethambile. Ama-SARM azophinde anikeze abesifazane ukwanda okuhle kwamandla wonke.
Abesifazane bangasebenzisa ama-SARM, noma kunjalo, kubalulekile ukwazi ukuthi abesifazane bavame ukuthinteka kakhulu yimiphumela emibi kunabesilisa. Izinduna, ukukhula kwezinwele okuningi, ukushintsha i-libido, ukushintsha kwemizwelo, nokujula kwezwi ngezinye zezinto abesifazane abangazizwela, ngakho-ke kubalulekile ukukhetha ngokucophelela ukuthi yimaphi ama-SAR okufanele awathathe futhi aqaphe imiphumela emibi ehlangabezane nayo. Kubalulekile futhi ukuthi abesifazane banamathele ekwelashweni kwangemva komjikelezo lapho sebedlule umjikelezo wamaSARM.
Abesifazane abathatha ama-SARM bangahle babone imiphumela ngokushesha. Ukuthuthuka kungaqala ukwenzeka emasontweni angama-1-2. Nazi izinhlobo zama-SARM anconyelwe abesifazane:
Isilinganiso se-SARM sabesifazane
Abesifazane bazodinga ukuthatha isilinganiso esincane kunabalingani babo besilisa. Umthamo oqondile uzoncika ekutheni iyiphi i-SARM ethathwa. Isibonelo, nge-Ostarine, amadoda azodinga ukuqala nge-20 mg ngosuku futhi mhlawumbe asebenze ngendlela eya ku-30 ​​mg. Kodwa-ke, kwabesifazane, umthamo uzodinga kuphela ukuthi ube cishe nge-10 mg njalo ngosuku futhi ukhuphuke ukusuka lapho kuye ngemiphumela.
Mane ukhumbule ukuthi uma kukhulunywa ngamaSARM, imiphumela kanye nesilinganiso kuhlukile kuwo wonke umuntu, hhayi abesifazane kuphela. Kubalulekile ukuqala ngamanani amancane, bukela imiphumela, bese ulungisa ukusuka lapho.
Ama-SAR ayindlela enhle yabesifazane abanethemba lokukhulisa amandla abo kanye nemisipha njengoba bevame ukuzwa imiphumela ishesha. Amanye ama-prohormones nama-steroids angaba nokhahlo emzimbeni futhi aholele emazingeni aphezulu kakhulu emiphumela emibi kwabesifazane. Ama-SAR anikeza abesifazane ithuba lokukhipha imisipha yabo ngaphandle kokuqhuma kakhulu. Benza umehluko owanele wokuba nomthelela emzimbeni ngenkathi futhi bumnene. Futhi, abesifazane akudingeki babhekane nemiphumela emibi emibi ye-anabolic steroids.
Ukwelashwa Kwe-Post-Cycle ngemuva kokuthatha ama-SARM
I-Post-cycle therapy (i-PCT) yisikhathi esifushane ngemuva nje kokuqeda umjikelezo wama-SAR lapho umsebenzisi adinga ukubuyisela amazinga ama-hormone awo emazingeni ajwayelekile ngokusebenzisa inhlanganisela yezidakamizwa, ukudla kanye nezinye izinhlanganisela. Cabanga ngokwelashwa ngemuva komjikelezo njengendlela yokuvuselela umzimba.
Ayikho inkambo yokwelashwa okulingana nosayizi owodwa ngemuva kokujikeleza. Ngokuya ngamuntu, uhlobo lwe-SARM oluthathiwe, nobude besikhathi somjikelezo we-SARM, isifundo se-PCT singahloselwa izinto ezahlukahlukene. Konke kuncike ekuguleni.
Abasebenzisi kufanele bahlele i-PCT yabo kusengaphambili, imvamisa ngasekupheleni komjikelezo wama-SARM ukuqinisekisa ukuthi uketshezi olujwayelekile lwe-hormone luzinzile.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngoba ama-SAR anemiphumela engemihle futhi kunomthelela omncane kakhulu wokuthi ukwelashwa ngemuva komjikelezo akubalulekile njengoba kungaba njalo ngama-anabolic steroids wendabuko amaningi.
Amanye ama-SARM angenamandla amancane athathwe ngezikhathi ezimfushane, njenge-Andarine, angahle angadingi ukwelashwa ngemuva kokujikeleza, kanti uhlobo oluqinile lwe-SARM oluthathwe isikhathi sezinyanga ezimbalwa luzohlala ludinga ukwelashwa ngemuva komjikelezo.
Ungawathenga kuphi ama-SARM? Lapha eSARMs Store UK kunjalo
Njenganoma yini emakethe, kubalulekile ukucacisa phakathi kwama-SARM asezingeni eliphakeme nama-SARM wekhwalithi ephansi aqhamuka emithonjeni esolisayo. Ikakhulu, uma i-SARM enikelwayo ishibhile kakhulu kuneminye imikhiqizo etholakala emakethe khona-ke kungenzeka ukuthi ayiphakanyiswa emazingeni aphakeme kakhulu okukhiqiza nokukhiqiza. Nazi ezinye zezinhlobo zezinkinga ngama-SARM angakhiqizwa ngekhwalithi futhi aqinisekiswe yinkampani yangaphandle:
Ukungeza ubuthi namakhemikhali ayingozi kuma-SARM
Ukunciphisa ama-SARM ngezinto ezingenampilo
Ukwenza i-mislabeling ngenzuzo enkulu
Ukusika amakhona ngesikhathi sokukhiqiza ukonga ezindlekweni
Kubalulekile ukuthi uhlole ukuthi umkhiqizo wamaSARM uqinisekiswe yini ukuthi ungowesithathu yini ukwazi ukuthi ungumkhiqizo wekhwalithi yini.
Kwa-SARMs UK, sithengisa ama-SARM asezingeni eliphakeme kanye nezengezo eziphephile, ezisemthethweni, nezikhiqiza imiphumela. Ama-SAR wethu akhiqizwa e-UK ukuya emazingeni aphezulu kakhulu futhi kusetshenziswa izithako zebanga lezemithi. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi bangasebenzisa ama-SARM ngokuphepha ukukhulisa imisipha emincane futhi balahle amanoni.